May 2019 - POPPIN NEW
သားက မိဘနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ်
Pop Pin New May 5, 2019
သားက မိဘနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ် စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ သားက မိဘနှစ်ဦးအား ဓားဖြင့်ခုတ် ခဲ့သည် … ။ ကော့သောင်းမြို့၊ အော်ကြီးကျေးရွာတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ သားက ဖခင်ဖြစ်သူအား ဓားဖြင့်ခုတ်မှု ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည် …. ။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေ ၄ ရက်က ဒေါ်ဆုရီး (၅၅)နှစ်နှင့် ခင်ပွန်း …
သူ့ပတ်ဝန်းကျင် ၊ သူငယ်ချင်းများက ပစ်ပယ် ထားလို့ live လွင့်ပြီး ငိုခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ ရဲ့ Video
သူ့ပတ်ဝန်းကျင် ၊ သူငယ်ချင်းများက ပစ်ပယ် ထားလို့ live လွင့်ပြီး ငိုခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ ရဲ့ Video ဆက်ပက် သင်္ကြန် သီချင်းနဲ့ ဆယ်လီဖြစ်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ကျော်ကျော်နန္ဒ ဟာဆိုရင် သူ့ရဲ့ အများနဲ့မတူတဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းအမိုက်စားတွေကြောင့် နာမည်ကြီးလာသူပါ။ သူက ခုဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုပါ လက်ခံလုပ်ကိုင်နေပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ …
တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဒီလိုလေးတွေ ပြောင်းလဲလာပါမယ်
တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ယောက်ျားလေးတွေဟာ ဒီလိုလေးတွေ ပြောင်းလဲလာပါမယ် အပြုအမူဆိုတာ နှလုံးသားက လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင် အရင်ကနဲ့မတူပဲ ပြောင်းလဲလာတာလေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ပြောင်းလဲ မပေးနိုင်ပေမယ့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်မိသွားရင် သူ့ကိုယ်သူ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် တကယ်ချစ်မိသွားရင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။ …
ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကြီးပြင်းလာသူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ(၅)ချက်
ချုပ်ချယ်လွန်းတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ကြီးပြင်းလာသူတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ(၅)ချက် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပဲ တစ်ခါတရံမှာ မိဘတွေက သားသမီးတွေကို စိတ်ပူလို့၊ ကောင်းစေချင်လို့၊ လမ်းမှားမရောက်စေချင်လို့ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ လိုတာထက်ပိုပြီး ချုပ်ချယ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို သူ့အရွယ်နဲ့သူ ထိုက်သင့်သလောက်ပေးရတာဖြစ်လို့ ချုပ်ချယတိုင်းလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။ ချုပ်ချယ်တတ်လွန်းတဲ့ မိသားစုကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူတွေမှာ ဒီလိုလက္ခာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ (၁) ပျက်စီးတတ်တယ် ချုပ်ချယ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ …
စခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထားသော ကားထဲက ကလေးအလောင်း ၂ လောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
စခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထားသော ကားထဲက ကလေးအလောင်း ၂ လောင်း နောက်ဆက်တွဲ သတင်း သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ . မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှအူများထွက်လျှက်သေဆုံးနေကြောင်း …. သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ တောင်​ငူမြို ကားအတွင်းသေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးသေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးမှာ အသက် ၅ နှစ် ၆ နှစ်ခန့် အရွယ်ရှိကာ ပြီးခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်က သေဆုံးနေသော အနေအထားဖြစ်ပြီး …
ကားရှေ့ကို ထိုးမှောက်ပေးတဲ့ ဦးစိုးညွန့်.. သူ ဘာကြောင့်သေချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါပြီ..
ကားရှေ့ကို ထိုးမှောက်ပေးတဲ့ ဦးစိုးညွန့်.. သူ ဘာကြောင့်သေချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါပြီ.. မီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူ သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲပြောပြီ ၁.၅.၂၀၁၉နေ့က ကသာညဈေးတန်းပေါက်ဝမီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူအကြောင်း သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲ …. ။ ဂွင်ဖန်တာလား အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေပေးလာတော့ အတိအကျလေးဖြစ်အောင် စုံစမ်းပီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ … ။ သူ့နာမည်က…ဦးစိုးညွန့် အသက်က ၅၂နှစ် ပါ …. ။ သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် …
ဈေးဝယ်တဲ့အခါ သိပ်ဆစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး လိမ္မော်သီးရောင်းနေတဲ့ အဘွားအိုထံတွင် ဈေးဝယ်သွားသောအခါ ..
ဈေးဝယ်တဲ့အခါ သိပ်ဆစ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး လိမ္မော်သီးရောင်းနေတဲ့ အဘွားအိုထံတွင် ဈေးဝယ်သွားသောအခါ .. “ခြောက်ထောင်နဲ့ ရမလား၊ ခြောက်ထောင်နဲ့ ရရင် ယူမယ်”ဘုရားရေ၊ ကိုယ့်မှာ မျက်နှာတွေက ပူလှပြီ။ တကယ်ခင်ဗျ၊ တကယ်။မိန်းကလေးအများစု သိပ်ထူးချွန်တဲ့နေရာတွေထဲမှာ ဈေးဆစ်တာကလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ပဲခင်ဗျ။အခုလည်း ကြည့်လေ၊ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တန်တဲ့ ပစ္စည်းကို တစ်ဝက်ဈေးနဲ့ ခေါက်ချိုးဆစ်ချနေတာ။ ကိုယ့်မှာတော့ လက်မှာ ရွှေလက်ကောက်တွေ …
ရည်မှန်းချက်နဲ့ ရှင်သန်ပါ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်မရှင်ပါနဲ့
ရည်မှန်းချက်နဲ့ ရှင်သန်ပါ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်မရှင်ပါနဲ့။ရည်မှန်းချက်နဲ့ အသက်ရှင်ပါ။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ရတာ မောပန်းလွန်းသလောက် ရည်မှန်းချက်နဲ့ အသက်ရှင်ရတာ သိပ်ကိုစိတ်အားတက်ကြွတယ်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်ကြသူတွေက လူပျင်းတွေများတယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိသူတွေ များပါတယ် သတ္တိမရှိသူတွေများတယ်။”ငါ အနာဂတ်မှာ အောင်မြင်ချင်လိုက်တာ” “ငါ မနက်ဖြန်ကံကောင်းမှာပါ” “တစ်နေ့နေ့တော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့” စသဖြင့် မရေရာတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ရင်မှာပိုက်ပြီး အချိန်ဖြုန်းနေတတ်ကြ …
သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ . မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှအူများထွက်လျှက်သေဆုံးနေကြောင်း
သတင်းနောက်​ဆက်​တွဲ တောင်​ငူမြို ကားအတွင်းသေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦး သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ် နှစ်ဦးမှာ အသက် ၅ နှစ် ၆ နှစ်ခန့် အရွယ်ရှိကာ ပြီးခဲ့သော ၅ ရက်ခန့်က သေဆုံးနေသော အနေအထားဖြစ်ပြီး အနီးတွင်လည်း မူးဝေအော့အန်ထားခြင်း လက္ခဏာများနှင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးမှာ မိန်းမတန်ဆာမှအူများထွက်လျှက် အနေအထားဖြင့် မော်တော်ယာဉ် နောက်ခန်း၏ ထိုင်ခုံများရှေ့ ခြေနင်းနေရာတွင် အထက်အောက် သေဆုံးနေခဲ့ကြခြင်း …
မီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူ သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲပြောပြီ
၁.၅.၂၀၁၉နေ့က ကသာညဈေးတန်းပေါက်ဝမီးပွိုင့်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သေကြောင်းကြံတဲ့သူအကြောင်း သူဘာကြောင့်သေချင်တာလဲ ဂွင်ဖန်တာလား အမျိုးမျိုးထင်ကြေးတွေပေးလာတော့ အတိအကျလေးဖြစ်အောင် စုံစမ်းပီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ သူ့နာမည်က…ဦးစိုးညွန့် အသက်က ၅၂နှစ် သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် သမီးကအသက်၁၁နှစ်သားလေးက၇နှစ်ပါ သူတို့မိသားစုဟာမဘိမ်းမြို့နယ် ရွှေကျောင်းကုန်းကျေးရွာမှာနေထိုင်ကြပါတယ် သူ့အမျိုးသမီးက သူ့သားအငယ်လေး၁နှစ်သားမှာ ဆုံးသွားပြီး သားသမီးတွေကိုလယ်ယာလုပ် ကြုံရာအလုပ်တွေလုပ်ပီးပြုစုပျိုးထောင် ပေးခဲ့တယ်… အာ့လိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့၃လကျော်ကသူဟာအခင်းထဲသွားတဲ့လမ်းမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးသူ့ညာဘက်ခြေဖနောင့်ရိုးကျိုးကြေသွားလို့ ဗန်းမော်ဆေးရုံမှာသွားရောက်ကုသခဲ့ပါတယ် ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့် ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပြီးရွာပြန်ခဲ့အလုပ်ကမလုပ်နိုင်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာနေတဲ့အချိန်😔 …